Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 9.3.2 | IPhone nhau
Sezvo isu takafambira mberi nezuro, Apple yaigona kuvhura iyo yeruzhinji vhezheni yechipiri beta yeIOS 9.3.2. Kuburitswa kwakaitika chaizvo maawa makumi maviri nemana mushure mekuburitswa kweyekuvandudza vhezheni, zvinoitika kune yekutanga beta vhezheni yeshanduro nyowani yeIOS. Kunyangwe ichinzi beta yechipiri, ino ndiyo yekutanga yeruzhinji beta yeIOS 24, nekuti yekutanga beta chaiyo yaive isingawanikwe kune vasiri-vagadziri.
Kana iwe uchida kuisa iyi beta uye uine iyo yekuvandudza ichioneka kuburikidza neOTA, uchafanirwa kunyorera kune apple beta chirongwa, iyo inotsanangurwa muchinyorwa chedu Maitiro ekunyorera kuti uise iOS 9 yeruzhinji beta. Kunyangwe ini ndichiziva kuti iyo bug inogona kutiruma, ini handikurudzire kuisa software mu beta, uye kunyangwe zvishoma kana isu tiri kutaura nezve diki gadziriso. Zvingangodaro, isu tinozoona kukundikana, uko kunogona kuve mutengo wakakwira kana iyo vhezheni yatinoda kuisa isingatipe chero chinhu chitsva uye iyo yatakaisa inoshanda nemazvo.
iOS 9.3.2 beta 2 inobvumidza kushandisa Night Shift uye yekuchengetedza modhi panguva imwe chete.
Kunyangwe pasina shanduko dzekutaura nezvadzo dzaitarisirwa, iyi beta yechipiri inokutendera iwe kushandisa Night Shift uye simba rekuchengetedza mode panguva imwe chete. Mune yapfuura beta, senge yekupedzisira yepamutemo vhezheni, kana isu tikamutsa simba rekuchengetedza maitiro, iyo system iyo Apple yakaunzwa muIOS 9.3 uye iyo inoshanda kutibatsira isu kurara husiku ichave yakamiswa. Kune zvese zvimwe zvinhu, zvinoita sekunge iyi vhezheni nyowani ichaburitswa kupolishira sisitimu zvishoma, chimwe chinhu chingave nhau dzakanakisa kana tiri kusangana nekuita uye matambudziko emvura.
Tichifunga nezve mugwagwa weApple, iyi vhezheni itsva ingangoburitswa pachena mukati mezhizha, ndingati Chikunguru kana padiki. Kana iwe ukafunga kuisa iyo, usazeze kusiya yako ruzivo mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Apple Inoburitsa Yechipiri Veruzhinji Beta yeIOS 9.3.2
Claudia ramirez akadaro
Mhoroi, ndatsvaga mambure asi handisi kuwana kuti zvakaitika kune ani zvake, ndinobvunzawo.
Mukuvandudzwa kweios 9.3 ndakaona matambudziko ekubatanidza nebluetooth remota yangu, yatove ne9.3.1 kukundikana izere, inobatana uye inodonhedza nguva dzese.
Ndakaedza kubatana nemamwe mabluetooth mota michina uye masipika uye anoshanda nemazvo, ini ndakagadzirisa software yemota ...
Chii chaunokurudzira iwe?
Pindura kuna Claudia Ramirez
Apple inoburitsa yechipiri beta yeTVOS 9.2.1